Ozi Mgbasa Ozi Email You Kwesịrị Knowmara | Martech Zone
Amachaghị m na ọnụọgụ ahịa email ọ bụla dị mkpa na ịre ahịa email gị, mana ole na ole n'ime ha pụtara m nso:
Ego Mgbasa Ozi Email bụ ihe ijuanya na ala underutilized. M mgbe nile anya na anyị onwe anyị blog na nkụnye eji isi mee ad anọgide na-ere si… ma ọ dịghị onye zụrụ mgbasa ozi na akwụkwọ akụkọ anyị kwa ụbọchị na kwa izu nke ahụ ruru ndị debanyere aha 75,000 kwa izu.
Email nkuchi nọ na elu, na 95% nke ndị na-azụ ahịa na-enyocha email ha ọ dịkarịa ala otu ugboro n'ụbọchị! Ọ bụrụ na ị naghị eziga ozi izizi maka nnweta, njigide na atụmatụ azịza maka atụmanya gị na ndị ahịa gị… ị na-efu efu!
Ejiji Email Ekwentị na-arị elu! 64% nke ndị na-eme mkpebi na-agụ ozi ịntanetị site na ngwaọrụ mkpanaka. Email gị ọ na-anabata ngwa ngwa ekwentị ma dịkwa mfe ọgụgụ? Stilljọ na-atụ m na ọtụtụ ụdị igodo zitere m ozi ịntanetị nke m na-enweghị ike ịgụ na ekwentị m. Ọtụtụ oge m na-arụsi ọrụ ike nke na m na-ehichapụ ha kama ichere ruo mgbe m laghachiri na desktọọpụ ịgụ ha.
Ikekwe ọnụọgụ kachasị dị mkpa niile bụ na maka $ 1 niile eji azụrụ ahịa email, $ 44.25 bụ nkezi nloghachi na ntinye ego ahia email. Nke ahụ bụ nlọghachi na ntinye ego nke enweghị oke site na ọwa ahịa na usoro ndị ọzọ.
Ozi nkowa mgbakwunye site Visualistan.
Tags: email imeweemail Marketingemail ahia statsemail agụemail statsemail mkpanakaemail na-anabata ozi ịntanetịemail na-anabata